Hungary, njem ụbọchị site na Budapest | Akụkọ Njem
Hungary, njem ụbọchị site na Budapest
Mariela Carril | | Budapest, Nduzi
Isi obodo bụ ihe ndọta maka ndị njem, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere mba ahụ, ọ kachasị mma ịhapụ obere ma gaa n'ihu. Taa m gwa Abigel a njem gafere Budapest, isi obodo Hungary.
Obi abụọ adịghị ya na ọnụ ụzọ ámá ahụ ga-abụ isi obodo, ma jiri ihe ndị a mara mma njem ụbọchị site na Budapest ị ga-amata obodo mara mma nke ọma. Ga-eso m?
1 Hungary na Budapest
2 Day njem si Budapest
Hungary na Budapest
Hungary bụ na etiti Europe ma ya na Ukraine, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia, Slovenia na Austria nwere oke. Yabụ, ịnwere ike isi n'ọtụtụ mba ndị ọzọ banye ma ọ bụ, site na ụgbọelu ozugbo, ịpụ na Budapest.
Isi obodo ahụ bụ ego etiti obodo yana dum Danube oge ochie bu Mpaghara ihe nketa nke uwa na ihe ncheta, chọọchị ochie, ụlọ nzukọ, ụlọ ochie na ebe ịsa ahụ ọkụ dị egwu. Ọ bụrụ na ị jiri ụgbọelu rute Ferenc Linszt International Airport ga-anabata gị. Ọ dị kilomita 16 site na etiti ahụ na enwere ike ịme bọs, tagzi ma ọ bụ ụgbọ oloko. Traingbọ oloko ọ na-ewe ihe dị ka nkeji 25 site na Terminal 1.
Ugbu a, mgbe ị hụrụ ihe ị ga-ahụ na Budapest, ị ga-eme atụmatụ ihe ụbọchị njem si Budapest ị ga-eme. Enwere ọtụtụ nhọrọ, mana ndị a bụ amụma m.
Day njem si Budapest
Ezenwata Ọ bụ otu n'ime ebe ndị kachasị ewu ewu na nso ebe ọ bụ naanị 20 kilomita n'ebe ugwu nke isi obodo ma enwere ike iji ụgbọ oloko rute na nkeji iri anọ. I nwekwara ike were bọs ma ọ bụ gbadaa n’osimiri ahụ, nke adịghị ọnụ ala, mana obi abụọ adịghị ya na ọ mara mma karịa.
Ọ bụrụ na ị gaa ụbọchị nwere ihu igwe dị mma, ọ dị mma ịga ije, rie ma drinkụọ n'otu n'ime ya ọtụtụ ụlọ nri na ụlọ ahịa nri ma ọ bụ zụta Hungary ncheta. Ọ bụ maa mma obodo, nke Cobbled n'okporo ámá, osisi na ụlọ ochie, dịka ụlọ ụka Blagovescenska site na etiti narị afọ XNUMX.
Zuo ike na mmiri nke Danube ya mere itinye oge n'ụsọ mmiri bụkwa ndụmọdụ. Soro Dumtsa Jeno na-aga ụkwụ na ụkwụ ma ọ bụ ya na ihe mgbe ochie, kpagharịa na Central Plaza ma ọ bụ Ogige Park na izu ike n'ụsọ osimiri dị mma. Ikwu ezigbo, i nwere ike ịrịgo Iwe iwe. Ọ bụrụ n ’echiche gị ga - eri ụbọchị niile, ịnwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe.
Visegrad Ọ bụ obodo dịdebere Budapest dịkwa mma nke ukwuu. O nwere akụ, nnukwu ụlọ ya, site na n'elu mgbidi ya echiche nke odida ala ndị Danube gafere dị ukwuu. Akụkụ kachasị mkpa nke njem ahụ bụ ịga leta Nnukwu ụlọ nke narị afọ XNUMX nke di n’elu ugwu. Si n'elu ebe a nnukwu echiche, ọ bụ ezie na ị ga-arịgo n’agbata awa abụọ na atọ. Kwesịrị ya!
Don'tchọghi ije nke ukwu? Mgbe ahụ enwere ụgbọ ala ị nwere ike ijide n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ewezuga ulo ukwu e nwere ụfọdụ cafes, mkpọmkpọ ebe nke a renaissance n'obí na a ngosi nka. Kedu ka ị ga-esi gaa Visegrád? El ụgbọ oloko si Budapest Ọ na-ewe otu elekere, mgbe ahụ ị ga-ebu ụgbọ mmiri gafere osimiri ahụ gaa Castle Hill. Ọzọkwa enwere ụgbọ ala si Újpest-Városkapu nke na-ewe otu awa na ọkara. N'oge dị elu i nwere ike gbadaa na Danube, site hydrofoil, N'ime awa.
Otu n’ime obodo ndị kacha ochie na Hungary bụ Esztergom, dị kilomita 60 site na Budapest. Maka ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme na ụlọ ochie n'anya nke a bụ ebe a na-aghaghị ịma. N'ihi gịnị? E nwere a mara mma katidral na ogidi, ụlọ elu na ebube ụzọ, ndị Obí eze nke narị afọ nke iri na ọtụtụ ụlọ ihe ngosi nka. Ozugbo ebe a ị nwere ike ịdebanye aha maka ịgagharị gburugburu ebe ahụ ma ọ bụ gbazite ụgbọ ala ị ga-aga gaa ugwu Pilis.
Nwere ike ịga ebe a site na ọdụ ụgbọ Nyugati site na ụgbọ oloko, n'ihe dị ka otu awa na ọkara. I nwekwara ike bọs site na ọdụ ụgbọ ala dị n'isi obodo ahụ ma were otu awa. Ma, n'ezie, site na hydrofoil ọ na-akpọrọ gị site na Vigadoter ọ na-ewekwa otu awa na ọkara.
Ọ bụrụ na nke a bụ ụdị obodo ịchọrọ, ebe ọzọ enwere ike ịga Eger, na mkpọda ndịda nke ugwu Bükk, Kilomita 140 n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Budapest. You'll ga-ahụ Churcheslọ ụka Baroque, ịsa ahụ ọkụ, ahịa na ọdịdị ala mara mma. Eger Basilica sitere na ọkara mbụ nke narị afọ nke XNUMX ma na-enye echiche ndị mara mma. Ọ bụghị naanị ya bụ ụka, enwere ụlọ ụka 17 baroque ịmara, na mgbakwunye na Dolọ Dobó ma ọ bụ Baroque Lyceum nke ụlọ elu ya dị mita 53 dị elu.
Obodo ochie nke Eger bụ akụ dị egwu na pearl ya, n’enweghị mgbagha ọ bụla, bụ Eger Castle malitere na narị afọ nke XNUMX o nwekwara akụkọ na-enweghị njedebe. Na ikpe azu, oburu na inwere otutu oge ma obu ichoro otutu mmanya anya, inwere ike gaa leta ubi vaịn ndị dị na mpụga site na obodo, na Ndagwurugwu nke Ndi Nwanyi Mara Mma. Enwere ike iji ụgbọ ala banye Eger n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa abụọ ma ọ bụ jiri ụgbọ oloko mee otu awa site na ọdụ Keleti.
Ebe ọzọ akwadoro bụ Ogige Ugwu Aggtelek na Baradla Cave. Ebe abụọ a dị ebube ma ọ bụghị n'efu ogige ahụ bụ Ebe Nketa itagewa. Ọ dị n'akụkụ ala ya na Slovakia, awa abụọ na ọkara ụgbọala si Budapest, ma nwee usoro ntanetị iji nwee mmasị na flora na fauna mpaghara. Ma n'ezie, ihe kachasị mma bụ Baradla Cave nke nwere nnukwu ọwa nke 7 kilomita nke na-abanye na mba agbata obi. Ileta ọgba a bụ ga-.
Este ọ bụ otu n'ime ụbọchị njem kachasị dịpụrụ adịpụ, ya mere hapụ isi obodo Hungary n'isi ụtụtụ. Ihe kacha mma bụ gaa n'ụgbọ ala gbazitere n'ihi na okporo ụzọ dịkwa mma, mana ọ bụrụ na ị nweghị ike, e nwere ụgbọ njem ọha: trenee ne trenee aba mana o doro anya na ha abụọ na-ewe ihe karịrị awa anọ.
N'ikpeazụ, njedebe ikpeazụ akwadoro bụ Hollọko. Site na bọs na Budapest ọ na-ewe awa abụọ ma ọrụ a na-esi kwa ụbọchị site na ọdụ Puskás Ferenc. Enwere bọs n’izuụka ụbọchị abụọ na ngwụsị izu. Nwere ike ịga ụgbọ oloko mana ọ naghị adaba n'ihi na ọ na-ewe ogologo oge.
Hollọkọ Ọ bụ ahụkarị Hungary village, World Heritage, na mkpọmkpọ ebe nke mara mma ụlọ Narị afọ nke iri na abụọ n’elu ugwu, ọtụtụ ememme omenala na di na nwunye nke okporo ámá nwere Lọ iri isii na isii ndị e wughachiri na nkume na osisi Ezigbo maka ịgagharị.
E nwere ọtụtụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ndị Lọ ihe ngosi nka nke lsmụ Bebi ma ọ bụ oflọ Ọrụ Ihe Emere WeaversIji maa atụ, ma ọ bụrụ n’ịga karịchaa n’oge Ista, ndị mmadụ na-eji ejiji n’ụdị ejiji ha ma ihe niile mara mma. Ezi ihu igwe dịkwa mma ileta Skansen Open Air Museum, ịmata ụfọdụ ọdịnala ndị Hungary.
Ruo ụfọdụ n'ime njem kachasị ụbọchị ị ga-atụ aro ka ị mee site na Budapest. Gaghị akwa mmakwaara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Budapest » Hungary, njem ụbọchị site na Budapest
Obodo New York